Robert Mugabe's new opponent: his 'daughter' Joice Mujuru
By Peta Thornycroft in Johannesburg 08 September 2015 • 20:21 pm
From left: Robert Mugabe, Joice Mujuru Credit: Photo: Reuters, Getty Images
Robert Mugabe will face a challenge from his one-time protégé, Joice Mujuru, after the spurned former vice president positioned herself as a rival in Zimbabwe's 2018 elections with the release of a political manifesto on Tuesday.
Mrs Mujuru, who once described herself as Mr Mugabe's 'daughter', is soon to launch her own party, People First, to take on the 91-year-old strongman and his powerful Zanu PF, according to the close ally who oversaw the manifesto release.
The document given to Zimbabwean media calls for a review of the so-called “indigenisation” legislation which has blocked foreign investment for the last decade. “All persons who call Zimbabwe home shall be entitled to access land and participate in its sustainable utilisation,” it said.
At present no white person can legally own farm land in Zimbabwe and the economy crashed when thousands were kicked off their farms from 2000.
Mrs Mujuru, 60, was seen as Mr Mugabe's likely successor until she was sacked from her post as vice president and expelled from the ruling Zanu PF last year after Grace Mugabe, the first lady, repeatedly accused her of plotting to assassinate the president and stage a coup d’état.
File photo: Zimbabwe's President Robert Mugabe and Joice Mujuru attend a rally marking Mugabe's 88th birthday in Mutare back in 2012
She also said she was close to Mr Mugabe and that she saw herself as his "daughter".